Archive du 20180115
250 000 000 Ar ho an’ny “CLD” Moto 9 no mba azon’ny distrikan’i Fandriana
250 tapitrisa Ariary ny vola natokana ho an’ny fampandrosoana ifotony amin’ny alalan’ny CLD (Comité Local de developpement) ho an'ny distrikan'i Fandriana. Tsy nisy afa-tsy “moto” vita sinoa miisa 9 no nandaniana ny vola, raha ny fampitam-baovao.
Ranon’Ikopa - Andohatapenaka Nahitana fatin-dehilany efa simba tanteraka
Fatin-dehilahy iray no hita tao anaty ranon’Ikopa teny Andohatapenaka, mifanitsy ny toeram-piantsonan’ny fiara vaovao ny marainan’ny sabotsy 13 janoary teo, tokony ho tamin’ny 9 ora latsaka kely teo ho eo.
Cjsoi, Lalao Afrikanina, Lalao Olimpika Nilaza ny programanasany ny minisitry ny fanatanjahantena
Nambaran’ny ministry ny tanora sy fanatanjahantena Malagasy, Andriamosarisoa Jean Anicet, ambangovangony tamin’ny mpanao gazety tetsy amin’ny birao fiasana tetsy Andohan’Analakely, tamin’ny sabotsy 13 janoary teo, ny praogramanasa taona 2018 ho tanterahin’ity ministera tarihany ity.
Fifidianana filohan’ny ligin’ny rugby - Analamanga 3 ireo kandida ofisialy navoakan’ny CER
Navoakan’ny CER na Commission Electorale Régionale eo amin’ny sehatry ny rugby eto Analamanga teny amin’ny kianja Makis omaly alahady 2018 ny anaran’ireo kandida ofisialy hifaninan-kofidiana ho filoha vaovao hitantana ny ligin’ny rugby eto Analamanga taorian’ny fitsipaham-pitokisana nataon’ireo seksion’ny rugby 3 misy ao anatin’izany ligy izany tamin’ny faramparan’ny taona 2017 iny.
Neymar Jr Tadiavin’ny Real Madrid halaina
Mandeha be ny resaka amin’izao fotoana fa te hahazo mafy an’i Neymar Jr mba hilalao ao amin’ny Real de Madrid ity klioba tarihan’i Zinédine Zidane ity.
Tovolahy 2 nodomin’ny “4x4” Maty tsy tra-drano ny iray
Tovolahy miisa 2 mpiasan’ny G4S, misehatra amin’ireny asa fiambenana orinasa na trano lehibe ireny no voadonan’ny fiara tsy mataho-dalana iray omaly tokony ho tamin’ny 8 ora sy fahefany alina teny Andoharanofotsy, ampitan’ny MaPizza.
Faha 105 taonan’i Dox Tsotsotra ny lanonana teny Andohalo
13 janoary 1913 – 13 janoary 2018, feno 105 taona ny sabotsy teo ilay poeta malagasy malaza, Jean Verdi Salomon Razakandraina na i Dox.
Lokabe krismasy - ORANGE Nahazo hatramin’ny 1.000.000 Ar ireo tsara vintana
Ny faran’ny herinandro teo no nanoloran’ny Orange Money ny valim-pitia ho an’ireo mpanjifany nandray anjara tamin’ilay lalao “Lokabe Krismasy” nokarakarain’izy ireo nandritra ny fankalazana fetin’ny Noely sy ny taona vaovao 2018.
Fandriampahalemana Manomboka voafehy ny ao Vakinankaratra
Nahitana fahombiazana ny asan’ny zandary raha ny 3 volana farany tamin’ny taom-piasana 2017 no tombanana, araka ny tatitra nentin’ny lehiben’ny vondron-tobim-paritry ny zandary ao Vakinankaratra, ny Kolonely Rasamboson.
Halatra moto sy vaky trano Olona 4 voasambotra teny Ivato
Olona miisa 4, vehivavy ny iray ary zazalahy tsy ampy taona koa ny iray tao anaty tambajotra iray mpanao halatra sy vaky trano no ravan’ny Zandarimariam-pirenena (ZP) teny Ankadindravola, kaominina Ivato ny 8 sy 9 janoary 2018 lasa teo.
ANDRO RATSY BERGUITTA
Nahazo anarana Berguitta ny sabotsy 13 janoary 2018 teo ilay andro ratsy any amin’ny ranomasimbe Indianina, ary voasokajy ho "Tempete Tropicale Moderée" na TTM,